Kwindlu kaMaria - iziko lembali laseMaratea - I-Airbnb
Kwindlu kaMaria - iziko lembali laseMaratea
Ifulethi elihle kwiindlela ezikwiziko lembali laseMaratea elineebhalkhoni ezimbini apho unokonwabela umbono omangalisayo wesitrato esikhulu. Olona lwandle lukufutshane lukumgama oziikhilomitha ezi-5, isikhululo sikaloliwe sikumgama oziikhilomitha ezi-4. Indawo esandul' ukufakwa, ezolileyo kunye nekhululekileyo.
Indawo epholileyo, enefenitshala entsha; yenziwe ngekhitshi, igumbi lokulala elineebhedi ezimbini ezingatshatanga \_ ibhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela kunye nesithuba esiphambi komatshini wokuhlamba.
Iziko lembali laseMaratea yintliziyo yayo yonke imisebenzi emikhulu yorhwebo, ekufuphi nendlu unokufumana iivenkile zempahla, ukutya, ikhemesti, indawo yokutyela, ibha, iposi, ibhanki. Ngapha koko, uninzi lweziganeko zexesha lasehlotyeni lwenzeka embindini.
Kwimeko yezicelo ezikhethekileyo okanye iimfuno ndiya kuzama ukuba ngexesha elifanelekileyo ekupheleni ukuqinisekisa iholide emnandi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maratea